Dongmeng Machinery ukwuu banyere àgwà nke ngwaahịa na ụlọ ọrụ aha. Ya mere, anyị ga-enye zuru okè tupu ire na mgbe-ire ọrụ n'ihi na ndị ahịa na-agbanwe agbanwe ịnụ ọkụ n'obi. Anyị guzosie a usoro nke ọrụ usoro si atụmatụ, imewe, saịtị nyocha echichi, mmezi na mmezi nke akụrụngwa. Anyị nwewa enye klas mbụ ngwaahịa na ọrụ maka ahịa.
(1) Iji họrọ kwesịrị ekwesị ngwọta maka ahịa.
(2) Chepụta nke kacha mma eruba chaatị.
(3) Kere na Nlụpụta anyị ngwá dị ka pụrụ iche chọrọ na dị iche iche ọnọdụ.
(4) Kenye teknuzu ọkachamara iji wụnye akụrụngwa na gbara akwụkwọ maka ahịa.
(5) Field ọzụzụ maka rụọ.
(6) nwere onwe anyị foundry osisi.
arụ ọrụ Field Ịnweta na Rock nhazi
Civil nchịkọta nhazi System
Nchịkọta nhazi System maka Hydro-dam Construction
Imewe nke Metallurgical slag na Raw Ihe nke Glass
Imewe nke refractory Ihe.
Na ihe karịrị afọ 20 nke jikọtara imewe, National & nkwupụta ụda; mba ahụmahụ na ore ndinuak & nkwupụta ụda; screening, egweri na mgbakwasa.; mba ịnweta usoro, egweri oru ngo, ndinuak osisi experience.We ji anyị onwe anyị na ndị na-emeghe, n'eziokwu na ele mmadụ anya n'ihu huu ị ga-esi kacha mma igwe na ngwọta maka gị oru ngo.
Anyị nwere ọtụtụ ihe na netwọk nke tụkwasịrị obi freelancers onye ipuiche a dịgasị iche iche nke nkà. Mgbe oru ngo na-achọ ndị dị otú ahụ na nkà anyị seamlessly jikwaa na iwekota ndị a ọkachamara n'ime oru ngo, na-anapụta zuru okè na-arụpụta oge ọ bụla.
Anyị Mee ma Gbaa Strong Relationships
Anyị na ahịa bụ ihe kacha mkpa anyị. Anyị na-ewu anyị azụmahịa na njikọ na ime ihe n'eziokwu na-eguzosi ike n'ezi, n'ịhụ na anyị mmekọrịta ikpeazụ afọ bụghị ọnwa. Iji ike ikwu kacha adabara imewe amaghị, biko ekwe ka anyị injinia na-amụ gị oru chọrọ na ihe ngwa.
Ọtụtụ n'ime ndị na-eleta ndị mba ọzọ ndị ahịa na-eche na-achọghị na oge mbụ. N'ihi na nke a, anyị aka ka ndokwa ụgbọala, hotels, na nsụgharị nke ọ bụla na-eleta ndị ahịa.